Ngaba ubusazi malunga nobukho benkxaso mali yokufunda indalo? | Uncwadi lwangoku
Ngaba ubusazi malunga nobukho benkxaso-mali yokudala indalo?
Kutshanje ndiye ndafunda isiqwenga sombono. Ndifuna ukuyokwabelana nawe, kuba benditshintshiwe ngokoqobo, xa bendifunda ukuba kukho iibhanki ezihlawula "ababhali" ukubhala nokubhala incwadi. Inqaku ekubhekiswa kulo labhala UAlberto Olmos en "Okuyimfihlo", kwaye ungayifunda apha.
Okona kubi kuko konke kukuba kubonakala ukuba sele kwenziwe iminyaka eliqela! Kwaye njengoko esitsho ngokufanelekileyo, xa bekunika imali ngaphambi kokuqala incwadi kwaye kufuneka uyigqibe, "kuyingxaki" ukwenza njalo ... Buphi ubugcisa bokubhala incwadi kwinto oyithandayo ukuyenza? Iphi indalo yoncwadi kwicala lombhali ekufuneka anike konke okusemandleni akhe ukuba ithengiswe kwaye ithandwe ngabafundi?
Ewe kuyinyani ukuba bambalwa kakhulu ababhali abaziphilisa ngokwenza lo msebenzi, kwaye izibonelelo ezinokukunikwa yincwadi ngokuthengisa, ukuba nje isebenza kakuhle, iphakathi kwe-1.000 10.000 ne-XNUMX leerandi, kude kakhulu ukusuka ukuya kuthi ga kwi-50.000 euro enikezelwa kwezi bhasari (isixa siyahluka ngokwibhanki okanye umzimba), kodwa uphi umngcipheko wokudalwa koncwadi? Ngaphezu koko, xa uqala incwadi ungazi nokuba uza kuyigqiba na; Nangona kunjalo, ngale mfundo yokufunda unyanzelekile ukuba uyigqibe. Kwaye, xa sele ibhaliwe, loluphi ulonwabo olufumana kule ncwadi ukuba sele uhlawulwe ngayo ngaphambi kokuba uyenze? Ngubani okuxelela ukuba le ncwadi ilungile kwaye unetalente yokubhala? Okona kubi kuko konke, kwaye kunengqiqo kwelinye icala, kukuba ibhanki ikunika imali njenge-scholarship, kwaye ukuba nangasiphi na isizathu awuyigqibi incwadi, kuya kufuneka uyibuyise loo mali. Umsebenzi owenzekileyo! Uxanduva ngakumbi, ukuthembeka okuncinci njengombhali, ukudala uncwadi oluncinci, kunye nokuzonwabisa okuncinci kwezobugcisa.
Ukuba umntu ubona uncedo lolu hlobo lweprojekthi yoyilo (kwaye ayisiyo mali yona), ndixelele, nceda.
Ukunikwa isibonelelo sokudalwa koncwadi akuqinisekisi ukuba incwadi yakho izakulunga; Oko akuthethi nokuba ungumbhali onetalente okanye umbhali; oko akuthethi, ngelishwa, ukuba uncwadi okanye ukufunda kuyakhuthazwa phakathi kwabantu abancinci. Masibe serious! Ukubhala bubugcisa, hayi isibophelelo okanye into eyenziweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ngaba ubusazi malunga nobukho benkxaso-mali yokudala indalo?
UJames Ellroy, uPepe Carvalho Award kwi-BCNegra. Inja eMad kunye nam
Ngaba uyasazi isicelo seNcwadi?